जयवागेश्वरी मन्दिरभित्रै भेटियो अर्को मन्दिर
काठमाडौं, भदौ २० : पशुपति क्षेत्रमा रहेको लिच्छविकालीन जयवागेश्वरी मन्दिरभित्रै अर्को मन्दिर भेटिएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि भत्काउँदा मन्दिरभित्रै अर्को मन्दिरको गजुर भेटिएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको यो मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि गत भदौ ८ गतेदेखि भत्काउन सुरु गरिएको हो। तीन तल्लाको मन्दिर भत्काउने क्रममा दुई तल्ला भत्काएपछि गजुर देखिएको स्थानीय सम्पदाप्रेमी जलद वैद्यले बताए।
गजुर देखिएपछि स्थानीयले मन्दिर भत्काउने कामलाई रोकेका छन्। मन्दिरभित्र अर्को गजुर रहेको अहिलेसम्म कसैलाई थाहा नभएको र यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्दिर भत्काउने काम हाललाई रोकिएको वैद्यले बताए।
पुरातत्वविद् तथा संस्कृतिविद्हरूले पनि उक्त गजुरबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। गजुर भेटाइएपछि स्थानीयले शुक्रबार सुझाव लिन भेला गराइएका पुरातत्वविद्हरुले मन्दिरभित्रै गजुर किन रहेको हो भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन्। तर, उनीहरूले उक्त मन्दिर पहिला एक तल्लाको मात्र भएको हुनुपर्ने पनि अनुमान गरेका छन्। एक तल्ला मात्र भएको मन्दिरलाई पछि जिर्णोद्वार गर्दा मन्दिरलाई नभत्काइ बाहिरबाट अर्को ठूलो मन्दिर बनाएको हुनसक्ने संस्कृतिविद्हरूको भनाइ छ।
‘मन्दिरको भित्री इट्टा र बाहिरी इट्टा हेर्दा फरक–फरक देखिएको छ। त्यसैले पनि यो मन्दिर पहिला जिर्णोद्वार गर्दा बाहिरबाट मात्रै ठूलो बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भने हुनुपर्छ,’ संस्कृतिविद् एकाराम सिंहले बताए।
संस्कृतिविद् डा. चुन्दा बज्राचार्यका अनुसार पनि भित्रको काठको तोरण तथा काठका ढोका र बाहिरका काठका दलिन, तोरणहरू पनि फरक–फरक देखिएको छ। उनले भने, ‘भित्र र बाहिरको स्वरुप हेर्दा पहिला मन्दिर जिर्णोद्वारको क्रममा बाहिरबाट ठूलो बनाएको जस्तो देखिन्छ।’
जयबागेश्वरी मन्दिर पशुपति क्षेत्रको प्राचीन मन्दिरमध्ये एक हो। यो मन्दिरलाई पशुपतिभन्दा पनि पहिलाको मन्दिरको रुपमा पनि लिइन्छ। संस्कृतिप्रेमी वैद्यका अनुसार देवमाला वंशावलीमा यो मन्दिर कलि संवत् ३२३२ मा निर्माण सुरु गरेर ३२३७ मा निर्माण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ। लिच्छविकालीन यो मन्दिरलाई वि.सं. १७०६ मा राजा प्रताप मल्लले जिर्णोद्वार गरेका थिए। वि.सं. १९९० को भूकम्पपछि पनि यो मन्दिरको जिर्णोद्वार भएको थियो।
प्राचीनकालीन यो मन्दिर तन्त्रसिद्धिबाट बनाइएको मानिन्छ। प्राचीन कलाकृतिले भरिएको जयवागेश्वरी मन्दिरभित्र महासरस्वतिको मूर्ति रहेको छ। मूर्तिको बायाँतर्फ गणेश र दायाँतर्फ भैरवको मूर्ति रहेको छ। यहाँ रहेको गणेशको मूर्ति सुँड नभएको गणेशको मूर्ति हो। सुँड नभएको गणेशको मूर्ति उपत्यकामा यहीँ मात्रै रहेको मानिन्छ।
भक्तपुरको प्रख्यात नवदुर्गा नृत्य हरेक वर्ष जयवागेश्वरी ल्याउनु पर्ने चलन रहेको छ। त्यस्तै, हरिसिद्धिको प्रख्यात नृत्य देवीनाच पनि हरेक १२ वर्षमा जयवागेश्वरी ल्याउने गरिन्छ। वि.सं. २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि तुलसी कन्स्ट्रक्सनलाई ३ करोड १४ लाखमा ठेक्का दिएको थियो।
कन्स्ट्रक्सनलाई मन्दिर परिसरमा जस्ताले घेरी मन्दिर भत्काउन सुरु गरेको थियो। कन्स्ट्रक्सनका अनुसार मन्दिरभित्र गजुर देखिएपछि पुरातत्व विभागले पनि अनुसन्धान गर्न ड्रोन क्यामेरा ल्याएर माथिबाट फोटो खिच्नु पर्ने भनेका छन्। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागबाट खटिइएका अधिकृत अमृता महर्जनले गजुरको नाप लिने कार्य हुने बताइन्। उनका अनुसार उक्त मन्दिरभित्र देखिएको तीनवटा गजुर तामाले बनाइ सुनले जलप लगाइएको छ।
तीनवटा गजुरमध्ये बीचको ठूलो गजुरमा भने भ्वाङ्ग देखिएको छ। स्थानीयका अनुसार मन्दिर भत्काउँदा असावधानीका कारण गजुरमा प्वाल परेको हुनसक्छ। पशुपति विकास कोषको जिम्मामा रहेको मन्दिरभित्र अर्को मन्दिर देखिएपछि काम रोकेको तीन दिन भइसक्दा पनि कोषबाट अहिलेसम्म कोही सोधपुछसम्म पनि गर्न नआएपछि स्थानीय भने आक्रोशित छन्।
Published Date: Friday, 6th September 19:18:47 PM